Google AMP plugin isiri kushanda? - Heino mhinduro kubva amp-cloud.de - SN
Google-AMP plug-in isiri kushanda? -
Rubatsiro uye mhinduro
Uri kushandisa imwe yeGoogle AMP plugins , iyo AMPHTML tag kana AMPHTML jenareta kugadzira Accelerated Mobile Mapeji (AMP) yewebhusaiti yako, asi iwo mapeji e AMP haasi kushanda nemazvo? - Pano iwe unowana mhinduro uye tsananguro yekuti ungawana sei chaiyo AMP shanduro nerubatsiro rweam-cloud.de!
Chikonzero chakajairika nei kugadzirwa kweiyo AMP peji isingashande kushomeka kweSchema.org ma tag. Iyo Inokurumidza Mahara Mapeji Magetsi jenareta anonyanya kubva pane schema.org ma tag / Micordata tag , inozivikanwawo se "data rakarongedzwa" .
Zvinyorwa zvako zveblogi kana zvinyorwa zvemashoko zvinofanirwa kuve zvine schema tag zvinoenderana nechimwe cheanotevera schema.org zvinyorwa kuitira kuti AMP plug-in uye neAMPHTML tag igone kusimbisa mapeji ako nenzira kwayo uye kuverenga zvakafanira dhata dhata.
Haufarire AMP peji?
Kana iyo peji re AMP rakagadzirwa kuburikidza neiyo AMP plugin kana iyo AMPHTML tag isipo, semuenzaniso iwo mavara, kana kana zvimwe zvinhu zvisina kuratidzwa zvakanaka pane AMP peji, izvi zvinowanzo kukonzerwa zvisiri izvo zvakaiswa maSchema.org ma tag kana kushaikwa Maka kweimwe data nzvimbo dziri papeji rako rekutanga.
Pakaitika zvikanganiso zvakadaro: chinja webhusaiti yacho AMP
Ingo tevedzera kurudziro pazasi kugadzirisa mawebhusaiti ako AMPHTML jenareta uye maGoogle AMP plugins, kuitira kuti kugadzirwa kwemapeji ako eAMP ashande zviri nani maererano nepfungwa dzako.
Gadzirisa zvikanganiso mune iyo AMP kuratidza:
Iwo maSchema.org markups anowanzoiswa nenzira yekuti, semuenzaniso, kwete chete yakachena chinyorwa chinyorwa chakavharirwa, asiwo zvinhu zvakaita sekugovana basa kana chirevo chekuita. Peji rinogona kusadudzirwa nemazvo uye nekudaro rinoburitsa zvisina kukodzera.
Iwe unogona kugadzirisa izvi nekuisa zviri nani kweSchema.org META ma tag nekusanganisira izvo chete zvinhu izvo chaizvo zviri zvechinyorwa chinyorwa. Naizvozvo, ita shuwa kushandisa ma micro data tag maererano nezvakanyorwa kuitira kuti iyo AMP plugin uye iyo AMPHTML tag inyatso kududzira iyo data pane yako webhusaiti kuitira kudzivirira zvikanganiso mukuratidzwa kwe AMP peji.
AMP peji haina chinyorwa?
Mune zvimwe zviitiko, peji rako re AMP rinogona kunge risina kana chinyorwa zvachose. Chikonzero chinowanzoitika cheichi kushaya Schema.org tag "chinyorwaBody" kana kushandiswa zvisirizvo kwechinyorwaBody tag.
Saka kuti iyo AMP plugin uye iyo AMPHTML tag ishande nemazvo uye inogona kuwana yako chinyorwa chinyorwa, ita shuwa kuti iwe unoshandisa iyo Mirco-Dhata-Maki nenzira kwayo zvinoenderana neimwe yeSchema.org zvinyorwa zvakanyorwa pamusoro uye kunyanya kune chinyorwa chinyorwa uchishandisa " articleBody " tag.
Iyo schema tag inogonesa inotarisa kuti yako blog kana chinyorwa chinyorwa chakamakwa nenzira kwayo uye chine dhata reiyo schema kuitira kuti iyo AMP plugin uye iyo AMPHTML tag igone kushanda nemazvo:
Google Yakagadziriswa Dhata Kuedza Turu
AMP peji isina data rakarongeka
Simbisa AMP peji isina data rakarongeka? - Kana chinyorwa chako chenhau kana chinyorwa cheblogi chisina chero ma schema tag, iyo AMPHTML jenareta inoshandisa akasiyana HTML ma tag mune sosi kodhi yenyaya yako peji peji kugadzira otomatiki iyo yakakodzera uye inogoneswa AMP peji yechinyorwa chako.